Asia Atsimo-Atsinanana: Tranonkalam-panabeazana ifanakalozana momba ny ara-pananahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2010 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Nanomboka nisokatra ny Jolay 2010 teo tany Singapore, ny vohikala sexxie.tv dia nilaza ho sehatra fampianarana ara-pananahana voalohany sy tokana erantany izay novolavolain'ireo mpitsabo malaza mikasika ny fampianarana ifanakalozana ara-pananahana.
S.E.X.X.I.E, izay midika hoe Fampianarana ifanakalozana amin'ireo Manampahaizana ara-pananahana, dia natokana ho an'ny fiarovana ny fahasalamana ara-pananahan'ny adolantsento sy ny olon-dehibe. Tsy sahala amin'ireo fandaraham-pianarana nentindrazana mikasika ny fananahana, ny sexxie.tv kosa dia mampiasa ny sehatry ny aterineto mba hahatratrarana izay liana amin'izany.
Noho ireo tranga mikasika ny fitondran'ny adolantsento vohoka, ny fanalan-jaza, ireo STI/STD sy fiakaran'ireo fanararaotana ara-pananahana erantany, manantena ny hameno ireo fampianarana ara-pananahana any an-tsekoly sy/na any an-trano, ny S.E.X.X.I.E mba hampahery ny adolantsento sy ny tanora lehibe mba handray andraikitra bebe kokoa mikasika ny tenany sy ny fihetsiny.
Rehefa manoloana ireo olana mikasika saro-pady ny fahasalaman'ny taovam-pananahana, dia manantona ny olona akaiky azy mba hakany toro-hevitra ny ankamaroan'ny adolantsento sy ny tanora. Matetika, tsy manana ny fitaovana sy fahaizana mifanaraka amin'izany ireo olona akaiky ireo mba hamahàny ny olana. Indraindray, na ireo ray aman-dreny koa aza dia toa tsy mahazo aina mihitsy rehefa miresaka tranga tahaka izany amin'ny zanany. Mety ho tena goavana anefa ny vokatr'izay.
Ny loharano tsy mitsara sy tsy miangatra tahaka an'i S.E.X.X.I.E dia afaka manolotra ireo adolantsento, tanora, ray aman-dreny, mampianatra, sy ny sisa, fampahalalàna am-pahatsorana, mahitsy sy amin'ny ankapobeny.
Hita ao amin'ny zavatra asongadin'ity vohikala ity ny sehatra Fanontaniana sy Valiny[Q&A], ny fijerena mivantana ireo horonantsary, lahatsoratra, sy seminera ao amin'ny aterineto na ireo ‘webinars’, ireo fanavaozam-baovao ao amin'ny Twitter sy ireo lahatsoratra ao amin'ny Facebook. Inona ireo webinars?
Izy ireo dia seminera virtoaly izay manome tranga tsotra. Tsy misy fomba fiteny ara-tsiansa saro-takarina eto. Tsotra sady mora takarina. Miditra ho mpikambana fotsiny dia izay! Ny zavatra hany ilainao dia ny solosainao sy ny fidirana aterineto. Isaky ny fiafaran'ny ora fianarana, dia mahazo ny valim-panontanian'ireo fanontanianao “mivantana” ianao; afaka mifanakalo hevitra mikasika ireo tranga saropady, ohatra, areti-mifindra noho ny firaisana ara-nofo, fivoahan'ny tsirin'aina aloha loatra, sy zavatra maro hafa ihany koa
Manome fanazavana misongadina sy ilaina amin'ny tanjon'ny fampianarana ara-pananahana izany. Amin'ny alalan'ireo resaka ao amin'ny SEXXIE, ireo adolantsento, ny efa manambady na ny tsirairay dia afaka miresaka misokatra bebe kokoa mikasika ny olana mianjady aminy tsirairay avy. Na any an-trano izany, na any am-piasana na koa trano fisotroana kafe, dia afaka miditra ho mpikambana maimaimpoana mba hanomboka ny fianarana miaraka amin'ireo mpitsabo malaza sy manampahaizana. Ireo sehatra Fanontaniana sy Valiny[Q&A] dia entina any amin'ny faran'ny fampahafantarana. Ireo “webinars” rehetra dia voavolavolan'ireo Tomponandraikitra Ambony amin'ny ara-pahasalamana ato aminay manokana.
Mitondra ity teny filamatra ity ny pejy Facebook-ny: Fampianarana momba ny fananahana ho an'ny vahoaka, avy amin'ny vahoaka.
Ataovy heno ny feonao. Mety ho mpampianatra ianao, ray aman-dreny miahiahy, tanora tia karokaroka, na koa mpianatra mazoto. Mety ho izatsy na iroa ianao. Fa manantena kosa izahay fa ny fiarahanao aminay ihany koa, dia ho lasa SEXXIE— Malalaka. Manana fahalalana tsara. Kinga. Mandray andraikitra.
Mino ny SEXXIE.TV fa samy mendrika ny hanana fahalalàna mendrika sy sahaza ny olona rehetra. Na mikasika olana kely izany na mikasika ireo olana momba ny taovam-pananahana sy ny firaisana, miezaka manabe izahay.
Ary satria izahay mino fa ny fampianarana dia mikasika ny fiatrehana ireo olana tena izy miaraka amin'ny vahaolana tena izy ihany koa , dia manome anao làlana mba hizaràna ny hevitrao izahay. Mianara avy amin'ny fijerena ny fiainan'ny olona hafa. Ao amin'ny SEXXIE.TV, antsoinay ho Fanabeazana ifanakalozana izany.
Dr. Love, mpamorona ny sexxie.tv, dia mitatitra fa mahazo tsikera amin'ny lafiny tsara avy amin'ireo mpampiasa aterineto erantany ity vohikala ity
Nahazo fitambarana mailaka/simaiso/ady hevitra ampolony ka hatramin'ny anjatony eo ho eo izahay ary indraindray aza dia mahatratra anarivony ao anatin'ny andro iray arakaraky ny karazan'ireo hetsika atolotra ao amin'ny vohikala.
Ny ankamaroan'ireo taratasy dia saika avy any Indonezia, Malezia, Singapore ary sy sasany kosa dia avy any Filipina.
Manomboka any amin'ireo tanora ka hatrany amin'ireo mpivady ny loharanom-panontaniana. Maro ireo mpanontany no tsy manafina anarana.
Manana mpiara-miasa izahay any Indonezia, Singapore ary atsy ho atsy dia hisy ihany koa dia hanana mpiara-miasa any Malezia, Inde ary Shina.
Indraindray izahay mahazo mpikambana 1 na 2 avy amin'ny olona izay te-hifanerasera aminay mangataka hanazava ny asanay, nefa niezaka namadika azy ireo ho mpikambana izahay taorian'ny nanazavanay azy ireo ny momba ny asanay.
Mikatsaka ny hampivelatra ireo asa maimaimpoana homen'ny vohikala ihany koa i Dr. Wei. Hanokatra toeram-pitsaboana STD virtoaly sy fampianarana mombamomba ny anatomy VR ampitaina mivantana amin'ny aterineto ho an'ireo sekoly ihany koa.